Soomaalida heysta diimaha aan Islaamka aheyn oo markii ugu horeysay fursad u helaya iney ka mid noqdaan baarlamanka cusub | Horn of Africa Observer
Soomaalida heysta diimaha aan Islaamka aheyn oo markii ugu horeysay fursad u helaya iney ka mid noqdaan baarlamanka cusub
Posted on February 19, 2012 by Moment Media Group
Faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxeysa shirkii habeen hore lagu soo xiray magaalada Garowe xarunta maamulka goboleedka Puntland kaasoo ay ka qeyb galeen madaxda dhinaca siyaasada Soomaalida, iyo xubno ka tirsan beesha caalamka iyo QM,. Iyadoo shirkaas oo ku sigtay inuu maalintii afaraad galo laga soo saaaray qodobo ku saabsan arimaha dastuurka, federaalka iyo baarlamanka.
Qodobada ayaa waxaa ka mid ah Qodob si cad u sheegaya in Puntland iyo Galmudug loo aqoonsaday maamulo jira oo is la’eg waxayna leeyihiin fursado iyo ka qeybgal isku mid ah. laakiin waxaa la raaciyey oo lagu xiray in Galmudug ay buuxiso qodobada u yaala maamul goboleedyada ee uu dhigayo axdiga KMG ah.
Nooca dowladda:- Dowlada waxay noqon doontaa nidaamka baarlamaaniga. Wuxuu qodobkan xusayaa in awooda fulinta uu yeelanayo raisul wasaaraha, halka madaxweynuhu uu noqon doono awooda ugu sareysa dowladda KMG kaasoo ay soo dooran doonaan baarlamaanka cusub wuxuuna ugu badnaan xilka heyn doonaa labo mar oo min 5 sano ah.
Sameynta Guddi doorasho:- Gudigan oo loo bixiyey “Interim Independent Electoral Commission” Guddiga Doorshada ee madaxa bannaan ee KMG ah oo ka kooban 15 ruux. Guddigan waxaa sameysanaya lixda saxiixayaasha ah ee kala ah; Madaxweyne Shariif, Raisul wasaare C/weli Gaas, Shariif Xasan, Madaxweyne Faroole, Madaxweyne Caalin iyo C/qaadir Macalin Nuur, iyagoo 4.5 ku saleynaya.
Waxay guddigan noqonayaan kuwa soo xulaya isla markaana go’aanka ka gaaraya xubnaha 1,000 ah ee Golaha Dastuuriga ah, Bogga 5aad ee heshiiska waxaa ku qoran “Haddii xubin loo soo xulay Golaha Dastuuriga ay la iman weyso shuruudaha waxaa dib loogu celinayaa saxiixayaasha heshiiska Garowe (micnaha lixda nin).
Awoodaha Maamulada:- Waxaa awoodo dheeraad ah heshiisku siinayaa maamulada, waxaana hadda maamul goboleedyada jira iyo kuwa iman doona ay yeelan doonaan awood la siman dawlada dhexe, si ka duwan Axdiga KMG ah oo sheegaya in heshiisyada caalamiga ah iyo arimaha siyaasadda ay masuul ka tahay dawlada dhexe.
Baarlamaanka cusub ee Federaalka:- Waxaa qodobkan lagu tixay shuruudaha lagu qaadanayo dadka soo gali doona baarlamaanka ee Soomaaliya, kuwaasoo ay ugu horeeyaan da’da iyo dhalashada. Waxaana ku qoran:- inuu yahay Soomaali, inuu da’diisa/da’deedau dhexeyso 25 illaa 70 jir, Aqoonta ugu yaraan dugsi sare (Waxaa laga saaray qodob horey loo soo jeediyey oo ahaa inuu heysto degree ama shahaado sare}, iyadoo tirada guud ee Xildhibaanadu ay noqonayaan 225 oo boqolkiiba 30 ay noqonayaan dumar), sidoo kale waxaa la sameeyay aqalka Odayaasha oo noqonaya 54-xubnood, kana awood badan xubnaha Baarlamaanka.
Arinta Diinta:- Waxaa Shuruudaha mudanaha baarlamaanka Soomaaliya laga saaray inuu yahay MUSLIM, Waxaana ku qoran sidan “Respect Islamic Values” oo micneheedu noqonayo (Waa inuu tixgeliyaa qiyamka Islaamka) taasoo fursad u siineysa dadka Soomaalida ah ee diimaha kale heysta iney xubno ka noqon karaan baarlamanka cusub hadii ay beelahooda soo sharaxaan.
Golaha Dastuuriga ah:- Waxaa lagu heshiiyey in gole loogu magacdaray “Golaha Dastuuriga” la sameeyo, kuwaasoo ka kooban 1,000 ruux. Waxaa haddaba iyana ku jirta, in 30% golaha ay noqdaan haween (taasoo micneheedu yahay 300 xubnood ayaa haween noqonaya) halka 700 hartay ay noqonayaan rag, Golaha Dastuuriga ee 1,000 ruux ahi lagama rabo wax aqoon ah, kaliya waa inay wax akhrin karaan (tani waxay horseedi kartaa in meesha ku soo ururaan dad aan wadaniyad iyo qaran waxba ka ogeyn”, Golaha Dastuuriga waxay ku imaanayaan habka qabiilka ee 4.5, iyaga ayaana ansixinaya baarlamaanka cusub ee federaalka (laakiin la isma weydiin iyaga laftooda yaa xalaaleynaya).